Ciidamadd Qalabka sida oo Howlgallo ka Sameeyay Baladweyn – Radio Muqdisho
Ciidamadd Qalabka sida oo Howlgallo ka Sameeyay Baladweyn
Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Howlgallo lagu xaqiijinayo Ammaanka waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan Gobolka Hiiraan,iyadoo Howlgalladaas lagu soo qab qabtay ku dhawaad “10” Toban Dhallinyaro ah iyo Hubkii ay wateen.
Howlgalkaan oo blilaawday aroortii hore ee saaka xilli ay san dad weynaha kasoo bixin xaafadahooda ayaa waxaa fulinayay ciidamadda qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ee kusugan Magaalada Baladweyn Howlgalka oo laga fuliyay xaafadaha ay ka koobantahay xaafadda Ogtoobar ee Magaalada baladweyn ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay guri guri u baareen dhammaan xaafada Ogtoobar.
korneelTawane Axmed Gureey Taliyaha Guutada 10 naad ee ciidanka Xoogga dalka ayaa kawar bixiyay Howlgalladii ciidamadda dowladda waa Barigii saakay ay ka sameeyeen Xaafadda Ogtoobar ee magaalada Baladweyn isagoo sheegay inay Ku soo qab qabteen Dhallinyaro looga shakiyay kooxda Alshabaab.
TaliyeTawane ayaa sheegay inay soo qab qabteen Rag haystay hub sharcidarro ah sidoo kale waxa uu uga digay bulshada kunool magaalada Baladweyn in ay qaadan hubka sharci darrada ah iyo gaadiidka isticmaala muraayadada modowga ah ee beensalka looyaqaanno haddii ay a waamirtaas dadku qaadan waayaan waxa uu sheegay in Tallaabo sharci ah laga qaadi doono.
“Waxaan Howgalladaas ay ahaayeen kuwo kadis ah, waxaana ku soo qab qabanay dhallinyaro looga shakiyay inay ka dambeeyeen dilal horey magaalada loogu geystay Nabaddoonno iyo Ciidammo” ayuu yiri Taliyaha guutada Tobanaad ee Ciidanka qalabka Sida ee Magaalada Baladweyn.
Madaxweynaha: ‘’Dib u soo nooleynta Akademiyadda Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta waxay ku fadhidaa micno taariikhi ah’ “SAWIRRO”
Hay’adda Relieve oo Xarun lagu Tababari Doono Wariyaasha Muqdisho ka furtay
Hay'adda Relieve oo Xarun lagu Tababari Doono Wariyaasha Muqdisho ka furtay